फुटबल, फुटसल र यसको चुनौति – fukuokanepal.news | सूचना र मनोरंजन को संगालो बोकेको नेपाली समाचार साइट
admin 2018-05-02 खेलकुदLeaveacomment
बाँचेपछि देख्न पाइन्छ भन्थे । हो, जीवनले हामीलाई सिकाइरहन्छ । आज म खेलको बारेमा कुरा गर्नेछु । फुटसलको बारेमा केही नभनी नहुने अवस्था देखियो । पक्कै पनि खेल्नु हरेक हिसाबले बेस्ट कुरा हो । यसको आफ्नै महत्व पनि छदैछ । फुटसल वा जुनसुकै खेल खेल्नका लागि ठूलै सिप, अवसर र सोखको कुरा होला । तर, आज म हामी सबैलाई राम्ररी थाहा भएको सत्य घटनाबाट कुरा थाल्छु । कथा संयोगान्त नभएकाले नाम लेखिन । बुझ्नेले बुझिहाल्नुहुन्छ, अन्यले यसको निश्कर्ष बुझे पुग्छ ।
आज मात्रै होइन । नाम चलेका खेलाडी साथी जापानमा पढ्न आएको धेरै भैसक्यो । हामी सबैले मानीआएका धर्मराज अधिकारी सरको इस्कुलमा आफैले उक्त क्षेत्रमा क्षमता भएका आफ्ना खेलाडी (बिध्यार्थी) लाई अवसर जुटाउन कोशिष गर्नुभयो । हामी सबैले आ-आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म कोशिष र प्राथना पनि गर्यौं तर सपना पुरा हुन सकेन । कारणबारे अहिले चर्चा नगरौं । परिणाम सोचेअनुरूपको हुन सकेन ।
आज समय वदलिएको छ । फुटसलको आयोजना हामी नेपालीले नै गर्न सकेका छौं । नेपाली खेलाडी मात्रको सहभागितामा पनि आयोजकले नाम र दाम कमाउन सकेको सत्य कुरा हो ।
खेलमा रोमान्स यसकारण पनि हो कि यसमा जोखिम लुकेको हुन्छ । यो जोखिम कसले लिनुपर्ने हो ? उदाहरणका लागि खेलाडीलाई ट्याकल भयो । दुर्भाग्यवस आजीवन घाइते भयो वा जीवन नै गुमायो भने आयोजक वा सम्बद्द कल्ब कसैको के कति भूमिका र जिम्मेवारी हुनुपर्छ ? जापानमा यसबारे के कस्तो नियम कानून छ ? यावत विषयमा कम्तिमा पनि नेपाली समुदायबीच छलफल चलाउने बेला भयो भन्ने नै यो लेखको मूख्य उद्देश्य हो ।जापानको नियम अनुसार त्यो गेम भएको दिन कुनै अप्रिय घटना घट्छ ,भने तेस्को सम्पूर्ण जिम्मा आयोजक कमिटीले लिनुपर्ने देखिन्छ । तर बिडम्बना हाम्रो फुकुओका मा मान्छेको जिन्दगीलाई मनोरन्जनको रुपमा मात्र भनेर आयोजना गर्ने गरिन्छ सरासर गलत भै रहेको छ ।
फुटसल नामक खेलको विरोध गर्न खोजेको होइन । मलाई पनि यो खेल निकै मन पर्छ । यसमा लगानी, लाभ-हानीको अनुभव बटुलेको पनि छु । यसकारण पनि धेरै लामो समयदेखि यसबारे चित्तै नबुझेको सत्य कुरा खोल्नै पर्ने भयो । यो बिशुद्द व्यापारमा परिणत भयो । ठिक छ, व्यापार सहि तर कानूनी व्यापार हुन सकेन । यो गैरकानूनी व्यापारले एकपछि अर्को थप बिकृति र बिसंगति निम्तायो । यसलाई बेलैमा हल नगरे यसले बिकराल रूप लिने सुनिश्चित देखियो ।
हामीले हाम्रो धरातल विर्सनु भएन । मनोरंजनबाट व्यापार र बिज्ञापनमा मोडिएको फुटसल टुर्नामेण्टले चाहे तयारीका नाममा होस वा खेलकै लागि किन नहोस ।
मूख्य गरी फ़ुकुओकको विभिन्न इस्कुल हरुमा अनुपस्थित हुनाले भिसा थप्न कारण खोज्ने,?काममा नजानाले आर्थिक अभाव हुने?र जित-हारको पावन उपलक्ष्यमा वरालियर पार्टी गर्ने, वियर उडाउने र पुरस्कार रकम संचय नगर्ने जस्तो कुलतको शिकार निर्दोष खेलाडी नै भैरहको देखिन्छ ।
यसका राम्रा र नराम्रा पक्षहरू दुबै छन् । भातृत्वका लागि प्रेमले खेलेर शरिर बनाउनु र युद्दझै देखिने खेल-बिचमा फरक हुन्छ । यसर्थ,जापानको कानुन पालना गर्न सक्ने सोसिकी -या तेस्ता दान्ताई हरुले मात्र यस्ता खेलहरु गर्ने प्रबन्ध गरिनु जरूरी छ । आयोजकले कम्तिमा पनि खेलमैदान, रेफ्री र खेलाडीको आयोजना अवधीभरको विमा गर्न सकोस । विमा अनिवार्य हो यसकारण पनि यो चुट्कीका बरमा आयोजना गर्ने खेलाची कुरा होइन ?
हेक्का रहोस, पैसा सबैथोक होइन । यसमा लाइफटाइम इन्जुरीको धेरै संभावना हुँदोरहेछ । घरमा खबर नगर्नुपर्ने अवस्था छ । घरायसी जिम्मेवारी, अपेक्षा, ऋण र भविष्यको हेक्का गरिदिने हो भने यस्ता टुर्नामेन्ट वार्षिक एउटा मात्र काफि छ ।
रजिष्ट्रेसन शुल्क लिने, कर नतिर्ने ? हरेक वर्ष शुल्कबृद्धि गर्ने, कारण नखोल्ने ? आयोजना गर्ने, विमा नगर्ने ? पार्टी भोज गर्ने, उपचार नगर्ने ? कसले लिने हो जिम्मेवारी ? करार नगर्ने ? प्रश्न थुप्रै छन् ।
सुनौलो भविष्यको सपना साचेर आएका निर्दोष नवयुवाहरूको भविष्यमाथी खेलवाड बन्द गरियोस । यसमा NRN, Japan सहित बिभिन्न क्षेत्रीय कमिटिहरू तथा शहरगत समाजहरू थप जिम्मेवार र सचेत हुनु जरूरी छ । गाक्कोहरूले झन फुटसल दुर्व्यसनीलाई अभियानको रूपमा नलिए अवस्था थप गम्भिर हुने कुरामा दुईमत छैन् । व्यापार गरौ, तर खेलवाड नगरौं कसैको भविस्यमाथी। सके नखेलौ, नसके खेलौ तर पसिना र स्वास्थ्यका लागि । साथीहरू, नकरात्मक नलिनुहोला । अनुभव बाडेको मात्र हो । के हामीसबैलाई थाहा छैन् ? हाम्रो परिस्थिति लुकाएर लुकिनेवाला छैन ।
फेरि पनि मेरो सुझाव छ । आयोजकले अनिवार्य विमा गर्नुपर्ने जापानी नियम हो । खेलाडीले एकपटक आयोजक वा कल्बलाई अनिवार्य सोध्नुहोला ।
अन्तमा मेरो लेखन प्रयासलाई भाषा हेरिदिने (अशोक क्षेत्री)सरलाई यहीबाट हार्दिक धन्यवाद ।
अशोक क्षेत्री, खेलाडी, धर्मराज अधिकारी, फुटसल